Gbanyụọ: Ga - Blockchain ga - ewepụ anyị logins na okwuntughe? | Martech Zone
Tọzdee, Machị 22, 2018 Tọzdee, Machị 22, 2018 Douglas Karr
Otu teknụzụ na-atọ ụtọ bụ igbochi. Ọ bụrụ na ịchọrọ nyocha nke teknụzụ blockchain - gụọ isiokwu anyị, Kedu ihe bụ teknụzụ Blockchain. Taa, m mere n'ofe ICO a, Gbanyụọ.
Kedu ihe bụ ICO?
ICO bu onyinye nkpuru mbu. Otu ICO na-eme mgbe mmadụ na-enye ndị na-etinye ego ụfọdụ ego nke cryptocurrency ọhụrụ ma ọ bụ mkpuchi crypto iji gbanwee megide cryptocurrencies dị ka Bitcoin ma ọ bụ Ethereum, n’okwu a REMME
Dabere na Forbes, mmebi iwu cyber ga-eru $ 2 puku ijeri site na 2019. Ọtụtụ n'ime mmebi ndị ahụ na-eme site na mwakpo ike nke aha njirimara na okwuntughe. Teknụzụ REMME na-eme ka okwuntughe gharazie ịla n'iyi, na-ewepụ ihe mmadụ na usoro nyocha. A bụ ihe nnyocha video:
Anyị na-aga n’ihu ịhụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ejikọ ndị ọrụ ha na paswọọdụ ha niile, na-enye ụzọ maka ndị na-agba ọsọ iji zuo nnukwu data sitere na ọdụ data na-alụbeghị di ma ọ bụ nke etiti. Site na nchekwa data ekesara, nke a enweghị ike ime - na-eme ya ụzọ kachasị mma iji chekwaa ozi dị nro.
na Gbanyụọ, ndị ọrụ gị adịghị mkpa dejupụta ụdị ma ọ bụ chọọ ogologo, okwuntughe dị mgbagwoju anya. Nyocha na naanị otu mfe, ala echedoro. Ọbụna na pịa ahụ nwere ike ijikọ yana nyocha abụọ.
REMME akọwapụtaala atụmatụ ha:
Enweghị ụlọ ọrụ asambodo - Ọ dịghị mkpa ka a akwụkwọ center - ị ịchịkwa gị akara aka. Site na igbochi ngọngọ dochie ikike ikikere, ụlọ ọrụ gị na-echekwa ego wee bụrụ onye nweere onwe ya karị.
Blockchains na Sidechains - Enwere ike iji sistemụ REMME jiri ọtụtụ ihe mgbochi na akụkụ dị iche iche. Nwere ike ịhọrọ ụlọ ọrụ kachasị adaba maka ụlọ ọrụ gị.
Jide njirimara gị - Igodo nkeonwe gị bụ, wee bụrụ, ihe nzuzo gị nke na-anaghị apụ na kọmputa gị. Kama nke ahụ, akwụkwọ REMME nke igodo nzuzo gị bịanyere aka nwere ike ịrụ ọrụ dị ka igodo ọha gị maka weebụsaịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
Ndị ọrụ nwekwara ike ịdenye aha na akaụntụ na-akparaghị ókè, nke ahụ nwere ọtụtụ asambodo SSL. Oge obula mgbe nbanye, ha nwere ike ịhọrọ akaụntụ nke ha ga-eji.
Soro Mmemme Pilot nke REMME
Tags: blockchainokwuntugheremmeaha njirimara